Jamaika: mpiasa mpizahatany 6500 mahery no nisoratra anarana mba hampiofanana maimaim-poana amin'ny Internet
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao momba ny fitsangatsanganana » Jamaika: mpiasa mpizahatany 6500 mahery no nisoratra anarana mba hampiofanana maimaim-poana amin'ny Internet
Vaovao Mafana Jamaika • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • fanabeazana • Vaovaom-panjakana • Hospitality Industry • Hotels & Resorts • fampiasam-bola • Vaovao • People • Fanambarana ho an'ny mpanao gazety • tompon'andraikitra • Safety • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • Vaovao isan-karazany
Ny Minisitry ny fizahantany ao Jamaika dia miresaka momba ny fiahiany an'i Jamaika
Nanambara ny minisitry ny fizahantany any Jamaika, Hon Edmund Bartlett fa hakatona anio alahady 26 ny fisoratana anarana ho an'ny fiofanana an-tserasera maimaimpoana ho an'ny mpiasan'ny fizahantany.th Aprily, 2020 amin'ny 4 hariva.
Hatreto dia mpiasan'ny fizahan-tany 6500 mahery no nisoratra anarana hatramin'ny nanombohana ny fandaharam-potoana ny Alarobia 22 aprily, miaraka amin'ny fampianarana tsy ara-dalàna. Ny fanapahana dia ny fandraisana ny fanombohana amin'ny fomba ofisialy ireo programa an-tserasera amin'ny alatsinainy 27 aprily.
Eo ambanin'ity programa ity dia omena fampianarana an-tserasera 10 maimaimpoana ireo mpiasan'ny fizahantany hanatsara ny fahaizany sy hanatsara ny fahaizany.
“Ny valin'ity fiofanana an-tserasera maimaimpoana ho an'ny mpiasan'ny fizahan-tany anay ity dia nahagaga tokoa ary mampiseho fa hitan'ireo mpiasanay ny sandan'ny fahazoana mari-pahaizana. Faly aho fa mandray an-tanana ny fandraisana anjara amin'ireto fampianarana ireto ny mpiasanay izay hanome azy ireo mari-pahaizana azo amboarina, "hoy ny minisitra Bartlett.
Ny fandraisana andraikitra, izay tarihin'ny Jamaika Centre of Innovation momba ny fizahan-tany (JCTI), fizarana ny Tahirim-bolan'ny fampiroboroboana ny fizahan-tany (TEF), dia miomana amin'ny fanampiana ireo mpiasan'ny fizahan-tany, izay nesorina noho ny fikatonan'ny hotely nandritra ny areti-mandringana COVID-19.
Ireto misy fampianarana natolotra: Ireto ny mpanatrika ny fanasan-damba, ny mpanatrika ny efitrano fandraisam-bahiny, ny fiofanana momba ny fiarovana ara-tsakafo, ny mpanara-maso ny fandraisana vahiny, ny fampidirana ny Espaniôla, ny fidiovana ho an'ny besinimaro, ny ekipan'ny ekipa fandraisam-bahiny, ny mpizara sakafo fisakafoanana voamarina, ny fanamarinana DJ. Ireo dia programa fanamarinana, izay midika fa ny mpilatsaka hofidina ihany no tena traikefa amin'ny asa no afaka.
"Fantatsika ny fifamoivoizana be niainan'ny tranonkala noho ny fahalianan'ny mpiasanay misoratra anarana ary hijery ny fomba hanitarana ny programa izahay," hoy ny minisitra Bartlett.
Miara-miasa amin'ny mpiara-miombon'antoka lehibe aminay ny programa. HEART / Fiofanana ho an'ny serivisy ho an'ny serivisy (HEART / NSTA), dia hanolotra fampianarana maimaimpoana ho an'ireo mpilatsaka hofidina ary handoa ny mpampianatra rehetra. Ny National Restaurant Association (NRA), tompon'ny American Hotel and Lodging Educational Institute (AHLEI), dia hanolotra ny sonia servSafe Certification, ary ny Universal Service Fund (USF) dia hanohana ireo olona mila fidirana amin'ny Internet.
Ny fampianarana rehetra dia misy fanadinana fanamarinana ary ireo mpilatsaka ho fidina mahomby dia hahazo mari-pankasitrahana avy amin'ireo andrim-panjakana manamarina, ao anatin'izany ny National Restaurant Association, ny American Hotel & Lodging Educational Institute ary HEART Trust / NSTA.
Raha te hamaky vaovao momba ny fitsangatsanganana bebe kokoa momba ny fitsidihan'i Jamaika Eto.